Cali Dheere oo dadka reer Muqdisho uga digay qaadashada Kaarka Aqoonsiga Dowladda hoose – idalenews.com
Cali Dheere oo dadka reer Muqdisho uga digay qaadashada Kaarka Aqoonsiga Dowladda hoose
Muqdisho(INO)- Ururka Al Shabaab ayaa shacabka ku nool Magaalada Muqdisho waxa ay uga digeen Qaadashada Kaarka Aqoonsiga Dowladda Hoose (Teesare Minashiibiyo), xilli Taliska Nabad Suggida iyo Duqa Muqdisho ay shacabka u sheegeen in loo baahan yahay qaadashada Kaarkaasi.
Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab Cali Maxamuud Raagge (Cali Dheere) ayaa sheegay inay u digayaan shacabka reer Muqdisho inaysan qaadan kaarkaasi Aqoonsiga.
Waxa uu sidoo kale uga digay Bulshada inaysan tagin goobaha lagu bixiyo kaarkaasi, maadaama Shabaab bartilmaameed ay tahay meel kasta oo lagu bixiyo Kaarka Aqoonsiga Dowladda Hoose.
“Waxaan rabaa inaan uga digno dadka Muslimiinta ah nimanka nagu soo duulay ee gaashaan raba inay ka dhigtaan Dadka Muslimiinta ah ee ay ku dhex jiraan kana dhex kaluumeystaan raba in dadka Muslimiinta ah ka feejignaadaan horta awalan meel ay joogaanba in loo dhawaado marka labaad in laga fogaado meelaha ay sheegeen in dadka ay ugu go’ynayaan kaararka iyo waxa lamidka ah.” Ayuu yiri Cali Dheere.
Afhayeenka Al Shabaab ayaa sababta dadka reer Muqdisho ay uga digayaan qaadashada Kaarka Aqoonsiga waxa uu ku sheegay inay tahay.
“Sababta waxa ay tahay koow dhaqaalihiina ayaa la rabaa in la qaato si aad gaajo ugu dhimataan kadibna dhaqaalihiina kursi iyo Madaxtinimo in lagu raadsado, labo xogtiina in gacanta loo geliyo Ajaanibta oo fara lagaa qaado oo sawir lagaa qaado, taana waa dhibaato la idinla maagan yahay dadka haka feejignaadaan arintaasi waa dhagar loo maleegaayo, Dhaqaalahooda ha xifdiyaan dadka Muslimiinta ah.”
Dagaalka Somaliya ka socda ayaa dhibaatada ugu badan waxa ay ka soo gaarta dadka shacabka ah oo Shabaab iyo Dowladda labaduba dushooda ay ku dagaalamayaan.
Awaamiirta qaar ee Dowladda Somaliya ay ku soo rogaan shacabka ku nool Magaalada Muqdisho ayaa fulinteeda adkaata, xilliyada sidan oo kale Shabaabka ay u digaan shacabka, maadaama Shabaab ay beegsanayaan qofkii qaata Kaarka Aqoonsiga Dowladda hoose.
Al Shabaab warns public taking Govt issued IDs